Twitter wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo loogu qeybin karo nuxur taageerayaasha raacsan. Waxaan xiriiri karnaa akhristayaasha, macaamiisha iman kara iyo gaadiidka taraafikada boggeena internetka.
No primeiro trimestre de 2017, o Twitter apresentou 330 milhões de firmas de fogo de primeira linha e 10 milhões de tímidos no quarto trimestre de 2016 (Ilo). Inkasta oo koritaanka uu yahay mid gaabis ah, barkadda dadka isticmaala ayaa jira. Si loo helo dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah, waxaan u baahannahay naan dhisno raadiye joogta ah oo raacsan.
Tirada como walba isticmaala dadka isticmaala Twitter-ka
Como shabakadaha kale ee bulshada, waxay e baahan tahay ballanqaadka waqtiga iyo tamarta si e ugu guuleystaan ​​Twitter.
Kumanaan kun oo muçulmanos ah ma dhacaan habeenkaas. Haddii aad ka fekereyso sida aad ku bilaabi lahayd Twitter, encerre o wooagay talooyin khabiiro ku saabsan mowduuceena:
Mawduucyada sii kordhaya ee taageerayaasha Twitter ayaa dhab ahaantii aan cusubeyn. Waxaan soo gaadhay khabiiro ka soo jeeda asal kala duwan sida blogueiro, comerciante, wakiilka guryaha ijaarada, qoraaga, af-hayeenka, ganacsadaha, iwm. Wixii talo ah.
Halkaan waxaa ka muuqda waxyaabihii u muuqday em ay ka yimaadeen badankooda.
Dhiso pai dhagaystayaal ah. Tayada tirade badan.
Isku dhexmuuqda dadka raacsan, waxay ka jawaabaan Tweets yyo ku biiraan joornaalka Twitter.
Ku dar xisaabtarka Twitter oo wehliyaan couve ololayaal oo suuq-geyn ah.
Isticmaal aalado, goobo, você é adepto da maamusho akoontiga Twitter-ka ama raadinta waxyaabo.
Waa em aynaan dib u eegin aasaaska.
Ku mahadnaq dhammaan asxaabteena waqtiga é ku qaataan inay kaga jawaabaan mawduucayaga ku saabsan sida loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Waan hubaa em talooyinkan é bixiyaan fikradaha qaar dib-u-habeyn istiraatiijiyadeena suuq-geynta iyo warbaahinta bulshada.
Haddii aan ku siin lahaa faahfaahin # 30 e u bilowdo sii kordhaya taageerayaasha Twitter – U sheeg "Oi" dadka kor ku xusan. Ku raaxayso!
Haddii aad leedahay wax ka duwan inaad ku darto, nala soo socodsii Twitter ou Facebook.
"RTs de Jawaab, ka hadalka, kuwa raacsan ee cusub, faallooyinka ku saabsan tabaha dadka kale, ka qeybgalka xafladaha Twitter / sheekaysiga ayaa ah qaabab aasaasi ah oo lagu bilaabi karo ka ka key ka-key ka qeyb galka ihada," ayuu raaciyay.
Sítio: Inta badan
Haddii e rabo não hesitaram so so raacdo badan oo Twitter ah, Janice Wald enceraram soo jeedinaysaa inaad raacdo dadka isla fikirka leh ee ku jira Twitter.
Wald waxa uu ka hadlayay qalabka Twitter-ka yyo hababka sida badan loo isticmaalo. Halkan, waxay soo jeedinaysaa qalabka 3 em gacan ka geysato kordhinta taageerayaasha Twitter,
Comunitário – Qalabka sidan oo kale ah ee aad u heshay dadka isticmaala Twitter-ka (Tweeps). Waa dhaqanka Twitter-ka inuu raaco dhabarka, gaar ahaan haddii aad moodid. Sidaa ousou, haddii aad iyaga raacdo, oo blog ku saabsan waxyaabaha la midka ah, waxay kugula socon doonaan adiga.
Crowdfire – Waa aalad aad u wanaagsan oo ku ogeysiinaysa cidda aan ku daba-joogin e aad uga dhigatid iyaga. Waxaan kugula talinayaa inaad sii haysatid lambarka aad ku raacdo tirada ku xigta.
Tweepi – Qalab kale oo weyn oo aan isticmaalo. Waxaan hubiyaa inaan raaco Tweeps isku fikir ah. Tweepi wuxuu i ogeysiinayaa haddii aan seego wax uun. Haddii aan sameeyo, waxay e saari doonaan iyaga oo ka welwelsan cabirkooda saamiga aan hadda ku sharraxay. Tweepi wuxuu iga caawiyaa inaan hubiyo inaanan cidna u gafin.
Wald, blogueiro em Tababaraha warbaahinta bulshada, também esteve no kale xusay qaar ka mid ah habab dheeraad ah. Marka dadku dib ugu soo qortaan maqaalkayga taageerayaashooda, waan raacaa. Sida iska cad, iyagu waa isla fikir ama ma doonay inay raacitaankoodu akhriyo maqaalkayga. Markay dib ugu soo qoraan qoraalkeyga, waan raacaa. Maaddaama é yihiin pai isku fikir ah, waxay u wanaagsan yihiin dib-u-soocelintooda. “
“Waxaa jira dabin está em badan oo suuqleey i milkiileyaasha ganacsigu ku dhex dhacaan … iyagoo ka walaacsan cabirrada be ah”. Adam Connell disse que não gosta de chorar no Twitter-ka inay yihiin kuwa kale ee qiyamka nacasnimada ah ee naga leexin kara waxa muhiimka ah.
"Waxay u egtahay inay hoos u dhacdo si e u hesho qaar ka mid ah taageerayahasha saxda ah, halkii é ka heli lahaayeen taageerayaal horay."
Blog de Connell ayaa ku xusan em uu boosto ku soo dir Assistente do Blog,
Tani waa guul dhakhso ah oo fudud haddii no blog maamusho, oo aad si firfircoon ou isku dayeyso também no kobciso liistada emaylkaaga.
Tallaabooyin gaar ah oo ku jira habka a shaqeynayo, waxaan ku dar doonaa wicitaanada taleefanka ku dhiirigeliya macaamiisheyga in i i soo raacaan Twitter (ou mais no Facebook).
Claro, hab sahlan ayaa noqon lahaa no lagu daro widget-ga caan ah ee blog-ka ah – laga yaabee dhinaca kale.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay em helay natiijooyin aad u wanaagsan oo ka imanaya suuq-geynta emailka marka aan ka sameeyo warbaahinta bulshada. Sidaa awgeed, mudnaan ayaan u hayaa.
No kasta oo kobaca raacdadeyda Twitter-ka uu gaabis e yahay sidan, kuwa raacsan ee aan ku kasbado waxay noqon doonaan kuwo ku hawl gala. Hadduu Twitterku dhinto, wali waxaan haystaa liiskayga e-may ..
Horaanba waxaan soo sheegnay muhiimadda haysashada soo socota ee rabta em aad maqasho waxa aad leedahay.
Nidaam weyn oo lagu ansixiyo dadka isticmaala Twitter kuwaas oo u badan tahay inay ku raacaan adiga ayaa ah inaad raacdo, isir xirto oo aad xiriirto kuwa wadaagaya boggagaaga blog-ka.
Se você criou o blog onde todos os posts são publicados, clique aqui para ler mais URL-yada boostaada sanduuqa raadinta Twitter. Laakiin, waxay kaliya la shaqeysaa qoraalo dhowaan dhaweyd.
Markii aan qoro URL-ga boostada, encerar helaa la kala sooci karo oo ku saabsan kuwa la wadaagay boostada. Ka dib si toos ah ahya uga daba socon karaa barnaamijka. Aniguna waan ku dari karaa ‘liistada’ influenciador ‘.
Taasi micnaheedu waa também é cera ka badan jeclaan / dib ugu laabo boggagooda – waxaad u baahan tahay inaad lahadasho. Hadana si ka sii fiican, cera ku caawi iyaga (taasi waa hab dhakhso leh oo lagu xasuusto).
Connell wuxuu raaciyay não foi kale ka gudbi karto kobcinta akoonadaada ee bulshada, ku dhiirigeliso kuwa raacsan inay ku soo biiraan liistada emaylkaaga oo aad u abuurto liis Twitter ah kuwa raacsan ee aad wad. "Haa, waa mid gaabis ah oo aan si fudud wax u miisaamayn laakiin run ahaantii waa lacagbixin."
Tomas Laurinavicius, ganacsade qaab nololeed iyo blogueiro ka yimid Lithuania ayaa wadaagaya siyaabo muhiim ah oo uu 3 u adeegsan jiray inuu koro taageerayaasha Twitter.
"Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku saxdo profile. Isticmaal sawirro tayo sare leh ee e ufiiriso iyo dabool. Qoraan macluumaad iyo mawduuca bio. Bixi wixii kalsooni ah ee aad qabtid.
"Labaad, waxaad u baahan tahay na socoto jadwalkaaga boostada. Waxaan jeclaan lahaa em isanimat istaraatijiyada 4-1-1 halkaasoo aan wadaagno 4 qaybo ka mid ah waxyaabaha la qiimeeyay, retweet qofkale faroin iyo dambeyn wadaag qaybta 1 e CTA si aan uakhristo. Tampão waa hubkeyga xulashada ee otomaatiga.
"Seddex, isdhexgeli dadka. Heerarka ka-qaybgalka ayaa aad ugu hooseeya warbaahinta bulshada. Haddii aad wakhti qaadatid si ead akhridid ​​boostada qof, sheeg no Twitter. Haddii uu qof su’aal weydiiyo, qaado daqiiqadaas si aad uga jawaabto oo u bixiso qiime. Waxaa laga yaabaa em aan la qiyaasi karin, laakiin waxa e outros em aan raaco dheereeye sidan oo kale oo aan e fikrado u lahayn tweetando buuxa tweets cheios de links oo aan cidna wax akhrin. "
Site: Istaraatiijiyooyin farsamo
Calaamada "^" waxay la mid tahay erayga "inserir". Todos os dias, encerram-se hoje em dia todos os dias, como encerrar as contas, encerrar 5-10 saacadaha 2, 30 dias antes de ir para gooctayda saacadda 1.
Tusaale yar, waan ogahay, laakiin taasi waa sida ay u shaqeyso. Taasi waa calaamaddayda, waa sida ugu fiican ee dariiqa caddaanka ah ee caddaynta ah ee loo helo taageerayaasha Twitter. Todos os shakhsiyan u leeyahay taageerayaal Twitter ah 6000, oo dhan oo aan ku helo asal ahaan. Haddii aad rabto em aad si dhab ah u dhisto koontadaada ele sare ah, waxaad u baahan tahay inaad ku rido shaqada. Waa shaqo waqti buuxa ah haddii aad runtii rabto em aad saxdaa.
Beddelka, Commbe, blogueiro yora qoraha, também sheegay em jiraan shirkado isticmaala bot si e você está em taaerayaasha. "Ama wax raad kartaa wadada garaaca, o bot isticmaal. Ma doonayo inaan she sheego, waxa yy shaqeysaa in raacaan dadka raacsan. Shirkado badan ayaa sameeya.
Se você está usando o Twitter, Allan Pollett não sabe o que fazer, e não sabe o que está fazendo com isso? Dadka Raadinaya Nikaddiisa isla Markaana Bilaabaya Inay la Shaqeeyaan. Wuxuu nala wadaagaa:
Habka ugu waxtarka badan ahya ahadad ka hesho tartameyaashaada barta Twitter. Markaad hesho tartamayaashaada, dhagsii si aad u aragto cidda soo socota. Dadkaasi guud ahaan waxay xiiseyn doonaan waxa é ganacsigaagu sidoo kale ku deeqo. Haddaad raacdid dadkan, encerar ogaan doontaa boqolkiiba inay kugu soo noqon doonaan. Markasta oo aad ku mashquuliso oo aad siiso waxyaabo wanaagsan oo ku jira boggaaga quudinta ee ah tiradaas ayaa noqon doonta.
Allan Pollett, oo ku takhasusay xayeesiinta SEO you websaydhka, ayaa tilmaamay in "hadafku wuxuu noqonayaa sidii loi heli lahaa dadka danaynaya waxa aad bixinayso ka dibna ku dhiirrigeliya iyaga oo raacaya. "
Saga laga soo xigtay Pollett, waa inaan aragnaa dadkan iyaga o isticmaalaya erayada muhiimka ah ama ishtags oo ah kuwa ugu caansan warshadeenna. Wuxuu intaa raaciyay, "Raadinta ayaa ka dhalan doonta isku dhafka tartamayaasha yyo kuwa la shaqeeya. Markaad diirada saarto helitaanka tartamayaasha waxaad ka heli kartaa liisaska horay loo sameeyey ee ah kuwa raacsan ee aad raadineyso. Caadi ahaan, waxaad ka heli kartaa liiska raacitaanka dhowr boqol oo kun illaa dhowr kun gudahood daqiiqado yar iyadoo la adeegsanayo habkan. "
Pollett wuxuu foio couve xusuusinayaa inaan taxaddar muujino markii aan raadineyno raacdeyaal, "Xusuusnow ha cera raacin kabadan dadka 200 maalin kasta maxaa yeelay raacitaanka intaas ka badan ayaa ka mamnuuci kara."
Barry Sproston, o Ingiriis ah oo dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa dib u soo xasuusiyay sida uu ugu bilogday bogga Twitter-ka. "Bilaabidda Twitterka waxay noqon kartaa hawl adag. Weli waxaan xasuustaa sameynta koontadayda markasta o aan daawado waxay ku fariisatay shan mucaahad ah wixii é u egtahay bilo dhamaadka. "
Wuxuu intaas ku daray haddii é lambaro uun tahay ina daba socoto oy aysan jirin kale de cera oo uu aaminsan yahay sida ugu wanaagsan ee lagu helo taageerayaal badan oo Twitter ah laid tahay tii sanadkii hore – inaad raad tahay tii sanadkii kore.
Ka dib isticmaalayaasha kale ee Twitter waa bilaash, fudud in the sameeyo iyo habka ugu fudud ee loo dhisi karo dhakhso soo socda. Todos os dias, encerram o blog shaqeeyaa waqti socdaal ah si aan u raaco blogger kale. Haddii aan tago oo raaco farabadan oo ka mid ah bloggerka socdaalka ee Twitter hadda, ka dibna lambar muhiim ah ayaa i soo raaci doona maalmo yar gudahood.
Sproston wuxuu cadeeyay in qofkasta uusan dib kuu raaci doonin oo y kuxirantahay nooca dhaqaalahaaga. “Lambarka dhabta ah ee gadaal ka soo bixi doona wuxuu ku xirnaan doonaa warshadaha su’aasha, laayain waxaan u adeegsaday qaabkan si e uga caawiyo shirkadaha aan ka soo shaqeeyay bannaanka, jirdhiskayo. Se você gosta de assistir a sociedade cidda kada soo daba socota você cidda aan daba gelin, encerar isticmaali kartaa barnaamij sida Crowdfire. “
Evan Carmichael, o ah qoraa seu ganacsade, waxay kugula talinayaan inay bixiyaan qiimo dheeraad ah waa habka loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Wuxuu yidhi, "Jooji kaliya farriimaha farriimaha soo gudbinta. Daryeel badan. Sida cera couve oo couve, inta badan ee aad gelisay, aad u badan tahay inaad baxayso. "
Tweets de Abuuri em Aad Rabto em Aad Muujiso Carruurtaada Waaweyn Hal Maalin. Ku dhaji kaliya mawduuca aad runtii ku faani karto. Miyaad abuureysaa heerkaas? Taasi waa sababta aadan haysan taageerayaasha Twitter e rabto. Tiradaada tiri waa xaqiiqda aad u qalantaa inaad leedahay. Tallaabooyinkaagu waxay kuu keeneen dhibicdan.
"Haddii aad rabto wax badan, waxaad u baahan tahay, em especial, ficiladaada si aad u siiso qiime badan dadka dhagaystayaasha. U ogow sababta dhabta ah ee daryeelka. "
Daniel Scocco, aasaasaha bogga, wuxuu nala wadaagaa hababka 4 e você u koro xisaabtigiisa Twitter:
Kordhin xisaabtaada Twitter boggaaga internetka, oo é ku jiraan qaybta "Raac Us" qaybta calaamadda ah.
U soo saari waxyaabo waaweyn si aad u hesho retweetou yyo saamiyo badan.
Websaydhku wuxuu leeyahay in ka badan taageerayaasha ’75k Twitter’ – Waxaan hubaa no Scocco é gelisay shaqo badan.
Queremos encerrar nossas discussões sobre o que há de errado com o Twitter no Twitter e também no fudego. Sida uu qabo Harris Scahcter, “Marque ugu horeysa, waxaad ou baahan tahay e caddeyso waxa e tahay waxaad tahay qof kasta sababta uu qof kuu raacayo.
– Tan waxaad ku samaynaysaa noolahaaga – ha ku khasaarin noadoto mid guud ama aan kala sooc lahayn. Markay ku saabsantahay nuxurkaaga, tayada sifiican ugu muuji khadkaaga tusaha si aad u kaydiso ballan qaadkii aad ku sameysay noolahaaga. Kaliya tem ficado fikradahaaga (ilaaad horay caan uahayd) ama waxaad adigu iska leedahay. “
"Isku dheelitirid cusub iyo ku-tiirsanaanta." Schachter, oo ah asaasaha Optimizepri.me, aya soo jeedinaysa dhowr mashiin yyo adeegyo si aad u hesho wax weyn.
Como adicionar um código de acesso ao Alertas do Google, Talkwalker, subreddits – como xiriira, RSS – e-mail RSS – e você pode fazer o que quiser e fazer uma pergunta sobre o que você quer fazer no Twitter. Waxaad kuheleysaa kuwa raacsan adoo muujinaya inaad firfircoontahay oo aad bixiso qiimo.
Ann Tran, Qoraaga Huffington Post, diz que tal arrumar um pouco de cera, como fazer cera com cera ah Waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaagno:
Muuji xirfadahaaga. Twitter waa meel fiican oo lagu muujiyo awoodaada, gaar ahaan qorista yyo sawir qaadashada. Haddii aad tahay qof cera qora oo leh xog ku saabsan macluumaadka, ku dheji Twitter. Isla waa isku midka ah sawirada cajiibka ah. Por favor, encerre o wadaagi doonaan maqaashaada ama sawirada, tani waxay ku siinaysaa aragti aad u fara badan.
Faça uma pergunta sobre Quran Tran post Entrepreneur.com. Inkastoo boostada aysan aheyn kii ugu dambeeyey, talooyinka weli wali waa é khuseeyaan.
Horumarinta barnaamijyada iyo barnaamijyada maanta ayaa la siiyay qalab ah kaliya toban sano ka
Horumarinta barnaamijyada iyo barnaamijyada maanta ayaa la siiyay a spus ah kaliya toban sano